आफुले ५ करोडको गाडी चढ्दा विलासी नहुने, नागरिकले चढ्ने चाहीँ विलासीः सा‌ंसद कडेँल
देबेन्द्रराज कडेँल, नेता नेपाली काँग्रेस
3:20 pm, सोमबार, जेठ १९, २०७७
काठमाडौं । अर्थमन्त्री आफैले लिएको नीतिमा अडिग छैनन् । त्यस्तोमा यो बजेटमाथि टिप्पणी गर्नु बेकार हो । जसरी विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाइएको छ । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपरित रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय हुने छन् भनेर बोल्नु भएको थियो त्यसको विरुद्धमा अहिलेको बजेट उत्रेको छ ।
प्रदेश सभाहरुले सन् २०२८ सम्ममा शतप्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय हुने भनेको छ । त्यसको विरुद्धमा यो बजेट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले हाइब्रिड कारमा छुट दिने व्यवस्था गर्नु भयो । जुन सहि कदम थियो । तर, उहाँ त्यसमा टिक्नु भएन । विदेशबाट नेपाली भन्सारसम्म गाडी आइपुगेपछि यो व्यवस्था उहाँले खारेज गर्नु भयो । नीतिगत स्थिरता नभएपछि कसले विश्वास गर्छ ।
अर्थमन्त्रीको कुरामा कुनै व्यवसायीले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । अहिले आएर विद्युतीय गाडी आयत गर्ने व्यवसायीलाई अन्योलमा पार्ने काम भएको छ । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । विद्युत उत्पादन बढेको छ । नेपालले विद्युत निर्यात गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ दिनानु दिन बढ्दो छ । त्यसमा ठूलो रकम बाहिरिएको छ ।
आफ्नै कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने विजुली प्रयोग गर्ने यस्ता सवारीसाधनमा ठूलो मात्रामा कर किन लगाइयो । उहाँले विलासिताको कुरा उठाउनु भयो । उहाँ आफैले चढ्ने गाडी कति करोडको हो ? आफैँ ५/६ करोडको गाडी चढेर हिड्ने अनि अरुलाई विलासिताको कुरा गर्ने ।
सधै डाक्टरहरुले ल्याएको बजेटमा किन उत्साह हुँदैन । महेश आचार्य, भरतमोहन अधिकारी, वर्षमान पुनः, विष्णु पौडेल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ल्याएको बजेटमा उत्साह हुने तर डाक्टरहरु डा बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महत र डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा उत्साह नहुने अवस्था किन आयो । (संसदमा बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै)